MS PowerToys: Open Source Utility ho an'ny mpampiasa Windows 10 | Avy amin'ny Linux
MS PowerToys: Open Source Utility ho an'ny mpampiasa Windows 10
Hatramin'ny taona lasa, Microsoft dia nanokana ho an'ny antoko liana, ny fonosana fitaovana maimaimpoana and of loharanom-baovao misokatra antsoina hoe MS PowerToys. Fitaovana izay natao ho an'ireo mpampiasa mandroso indrindra amin'izany Operating System, satria mamela hanao asa maro be tsy tafiditra ao anatiny ao.
Ho an'ny volana an'ny aprily 2020, ity fampiharana ity dia navaozina in-2 sahady. Ny fotoana voalohany 27 andro lasa izay ho an'ny 0.16.0 version, ary ny faharoa 21 andro lasa izay, ho an'ny kinova 0.16.1 ankehitriny.
Araka ny anao tranokala ofisialy ao amin'ny GitHub, hoy ny fangatahana dia faritana toy ny:
"Andiam-pitaovana ho an'ireo mpampiasa mandroso handamina tsara sy handefasana ny traikefa Windows ho an'ny famokarana bebe kokoa. Nahazo aingam-panahy avy amin'ny tetik'asa PowerToys an'ny vanim-potoana 95, ity famerenana ity dia manome mpampiasa mpampiasa fomba hanaparitahana fahombiazana bebe kokoa amin'ny akorandriaka Windows 10 ary ampanjifaina azy io ho an'ny tsiranoka tsirairay.".
Marihina fa ity tetik'asa ity dia nalain'ny Fitsipi-pitondran-tena momba ny Source Open Microsoft (Fitsipi-pitondrantena Source Source Open Microsoft). Izay no mahatonga ity fampiharana loharano misokatra ity hanatevin-daharana ny maro hafa navoaka tamin'ity fandraisana andraikitra ity hamoronana sy hanitarana ny fampiasana ny fampiharana loharano misokatra anatiny sy ivelany hoy Operating System.
Lisansa Microsoft Free sy Open Source Software
Rafitra miasa amin'ny ady: Microsoft miambina ny rehetra!
1 MS PowerToys - Fitaovana malalaka misokatra
1.1 Inona ny vaovao
1.1.1 Dikan 0.16.0
1.1.2 Dikan 0.16.1
1.1.3 Fitaovana tafiditra ao
MS PowerToys - Fitaovana malalaka misokatra
Anisan'ireo zava-baovao tafiditra amin'ity kinova ity ireto manaraka ireto:
Fanatsarana FancyZone: Fanatsarana ny fampiharana Multi-Monitor ary amin'ny UX notsorina.
Fitaovana vaovao: Anisan'ireny ny Markdown Preview, SVG Preview, Image Resizer ary Windows Walker.
Fanamboarana vaovao: Anisan'izany ny fanamboarana olana mihoatra ny 100.
Fanatsarana maro no voaporofo: Amin'ny alàlan'ny fitsapana natao.
Fitaovana vaovao navadika ho default.
Namboarina ny bibikely.
RDP bug ao FancyZones raikitra.
Fanampian'ny telemetry ao amin'ny Window Walker hanamarinana ny status activated.
Fitaovana tafiditra ao
FancyZones: Mpitantana varavarankely natao hanamorana ny famoronana lamina fitaratra sarotra sy ny fametrahana varavarankely haingana.
Tari-dalana hitsin-dàlana Windows: Torolàlana hitsin-dàlana izay miseho rehefa mitazona ny lakilen'ny Windows mandritra ny 1 segondra mahery ny mpampiasa ary mampiseho ny hitsin-dàlana hita eo amin'ny efijery.
PowerRename: Fanitarana Windows Shell, izay mamela ny fikarohana tsotra sy ny fanoloana mandroso kokoa na ny fampifangaroana ny fomba fiteny mahazatra izay mahatonga ny fikarohana vaovao ho mora kokoa.
File Explorer Plugins: Izay mamela ny topi-maso mialoha ny rakitra vaovao antsoina hoe: Markdown (.md) sy SVG (.svg)
Image Resizer: Fanitarana akorandriaka ahafahanao manova haingana ny haben'ny sary, amin'ny alàlan'ny tsindrio fotsiny eo amin'ny Explorer izay mamela anao hanova ny haben'ny sary mihoatra ny iray eo noho eo.
Fitsangatsanganana amin'ny varavarankely: Fampiharana ahafahanao mitady sy mifamadika eo amin'ny varavarankely misokatra, amin'ny alàlan'ny fitendry rehetra. Mampiasa zana-tsipika hivezivezy eo anelanelan'ny topi-maso, raha mitazona Alt + Tab.
Raha mila fanazavana fanampiny ofisialy momba ny kinova ankehitriny sy ho avy an'ity fampandrosoana loharano misokatra afaka miditra mivantana amin'ny manaraka ianao rohy.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" momba ny fonosana fitaovana maimaimpoana y loharanom-baovao misokatra «MS PowerToys», noeritreretina ho an'ireo mpampiasa mandroso indrindra amin'ity rafitra fiasa ity, satria mamela hanao asa be dia be tsy tafiditra ao anaty toerana misy azy io; be be fahalianana sy fampiasana, Ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » MS PowerToys: Open Source Utility ho an'ny mpampiasa Windows 10
Navoaka sahady ny kinova vaovao an'ny Fedora 32, fantaro ny vaovao
Manjaro Linux 20.0 tonga miaraka amin'i Kernel 5.6, Pacman 9.4 ary maro hafa